OpenSUSE 13.2 dị + ntuziaka nwụnye post | Site na Linux
Naanị oge ole na ole gara aga, otu OpenSUSE wepụtara ụdị nke kachasị ọhụrụ OZI 13.2.
1 OpenSUSE 13.2 Atụmatụ:
2 Ebee ka m ga-esi budata ya?
3 Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye?
OpenSUSE 13.2 Atụmatụ:
OpenSUSE 13.2 bụ ...
E tinyela mgbalị dị ukwuu n'ule na post a, yana ndozi nke ngwa ọrụ akpaghị aka nke openQA, ngwaọrụ nke na-ahụ na nsonaazụ njedebe enweghị ihe ịtụnanya na-adịghị mma.
Usoro faịlụ Btrfs bụ usoro faịlụ ndabara maka nkebi mgbọrọgwụ, na XFS maka nkebi / ụlọ. Linux 3.16 kernel na-ewetakwa mmelite na nkwụsi ike na nnabata nke ngwaike dị iche iche. Na mgbakwunye, koodu ntanye YaST etolitela mgbe etinyere ya na Ruby, asụsụ na-enye ohere maka mmepe nke atụmatụ na ngwaọrụ ọhụrụ.
Ntọhapụ a na-abịa na AppArmor 2.9 nke ndabara nke na-atụgharị gaa na nchedo na profaịlụ siri ike na AppArmor. Enwekwara ọtụtụ nchịkọta ndị ọzọ emelitere maka ọtụtụ ngwaọrụ netwọkụ ndị ọzọ dịka Samba, AutoYaST, na ọtụtụ ndị ọzọ.
OpenSUSE 13.2 na-abịa na GCC 4.8 na nhọrọ iji wụnye GCC 4.9 ọhụrụ, Qt 5.3 nke na-eweta ọtụtụ mmelite na interface QT. I nwekwara nhọrọ iji wụnye KDE5 ọhụrụ (nke ka na-aga n'ihu).
Na nhapụ nke a, YaST ọhụụ “atụgharịrị” gaa n’asụsụ Ruby etolitegodi na koodu ya ugbu a nwere ntụkwasị obi ma jupụta na njirimara ọhụụ karịa ka ị tụrụ anya n’aka Yast. ActiveDoc na-aga n'ihu ịbụ ebe ịchọta akwụkwọ maka ngwaọrụ dị iche iche ị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya na Linux. 13.2dị 4.14 na-enye KDE 5, nke ga-abụ ebe desktọọpụ, ebe ọrụ KDE na-aga n'ihu ịzụlite ihe ga-abụ Plasma 3.14. Mgbe ị nọ na GNOME ị nwere ike ịnụ ụtọ nsụgharị ya XNUMX. LXDE ka emegharịrị maka mwepụta a na ngwugwu emelitere, nkwalite anya, na ọtụtụ ndozi ahụhụ.
Linux 3.16 na-abịa na nkwalite maka ọhụụ, onye na-emeghe ihe na-emeghe maka kaadị NVIDIA, yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ maka eserese sitere na Intel na AMD. Kernel ọhụrụ a na - emekwa ka arụmọrụ nke Btrfs na XFS ka mma.
KDE na-abịa ugbu a nkwado maka ijikọ ngwaọrụ mkpanaka gị site na ngwugwu kdeconnect. Usoro faịlụ Btrfs ọhụrụ nke edoziri na ndabara maka nkewa mgbọrọgwụ, pụtara na ị ga-enwe ọtụtụ atụmatụ ọhụụ dị, karịa ka ị cheburu. YaST na-abia na interface Qt ohuru nke emeliterekwa na Qt5.
Ntọhapụ ọhụụ a nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke teknụzụ nnwale ọhụụ dịnụ nke ị nwere ike ịnwale, dị ka Wayland 1.4, KDE Frameworks 5, sọftụwia kachasị ọhụrụ dị na ụlọ ọrụ Mee na agba ọhụrụ maka isiokwu nkesa.
Imagesfọdụ onyonyo nke oghe mSUSE na Gnome:
Ebee ka m ga-esi budata ya?
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye?
Ozugbo arụnyere sistemụ ahụ, anyị ga-aga n'ihu na ịmepe ọnụ na ịpị:
su (anyị na-ewebata superuser paswọọdụ) zypper elu zypper wụnye-ọhụrụ-na-atụ aro
Ebe nchekwa Packman (akwadoro):
Anyị na-emelite usoro ahụ:
Anyị na-aga n'ihu na ntinye nke usoro mmemme:
zypper wụnye vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird zypper zypper wụnye-ọhụrụ-na-atụ aro
Anyị na-aga n'ihu na ntinye nke nchịkọta kacha nta iji chịkọta (nhọrọ):
Ma voila… have nwere gị openSUSE 13.2 dị njikere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » openSUSE 13.2 dị + ntuziaka nwụnye post !!!
Ihe 96 kwuru, hapụ nke gị
Ana m ekele gị nke ukwuu, mana mmadụ maara maka ndọtị nke na-ezobe akara ngosi nke ngwa anyị na-agba, nke na-apụta na ogwe elu, ebe ọ na-adịghị m mma, a si m na-ebi elementrị os luna na m ga-agbanwe sistemụ arụmọrụ, n'ihi mgbanwe kọmputa na nke ohuru anaghi ekwe ka m wunye elementary os so so m na ubuntu gnome 14.04.1
Nke a na-enyere gị aka:
Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka ha na-ere emeghe Suse hahaha mana m kwenyere na ọ bụ ezigbo distro
Anaghị m ere ya .. Ọ bụ naanị nnukwu distro :).
N'oge na-adịbeghị anya OpenSuse dị ezigbo mma, mana enweghị m ike ịkwụsị Debian, ọkachasị n'ihi na distro ọ bụla ọzọ na systemd na-agbachi nkịtị na mmalite (amaghị m ihe kpatara Debian anaghị eme). Na eziokwu bụ na Debían Testing na-arụ ọrụ ebube m. Ana m ejikwa FreeBSD na Slackware, mana na nke ikpeazụ, ana m eji ụbọchị m etinyeghachi ihe ndị gafere mgbe mmelite.
Abụ m onye ọrụ Debian agara m ọtụtụ ndị ọzọ ịnwale gụnyere FreeBSD na Slackware na njedebe ebe a ka m nọ na ụwa SUSE. FreeBSD 10 dị ukwuu mana ọ bụ naanị maka sava .. Na desktọọpụ ọ na-ata.
M na-eji FreeBSD dị ka desktọọpụ ọzọ, ọ bụghị kwa ụbọchị, ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m. Naanị m na-atụ uche GParted, gbagoo n'ụzọ dị mfe nkebi ma ọ bụ diski mpụga na Ext4 na nkwado ka mma maka Wacom (nke m na-enweghị ike iji mee ka stylus rụọ ọrụ ma ọ bụ gbaa). Ihe ndị ọzọ niile dị mma. Ọ bụrụ na enweghị m ọghọm atọ ahụ, aga m ahapụ Linux maka oge.
Na OpenSuse anọrọ m oge ụfọdụ, dị ka ọ dị ọtụtụ ndị ọzọ, ruo mgbe ike gwụrụ m ịmalite ịmalite ọtụtụ oge iji gbalịa ịbanye na nbanye nbanye.
Nke a bụ ihe kpatara m ji akpọ FreeBSD erughị ala na desktọọpụ :). Ma enwere ọtụtụ ihe… Na openSUSE ọ nweghị ihe ijuanya mere m kemgbe 12.3. Enwetụbeghị m nsogbu ị kwuru banyere ịmalitegharị iji banye na nbanye nbanye.
Ọ nwere onye nwere otu ihe dị ka m?,: Na 13.1 ọ naghị agbanyụ nsogbu na kernel (3.11) + ngwa ngwa m chere, mgbe ị na-emelite na 13.2 otu nsogbu ahụ (enweghị ike ịkwado acpi) na ịntanetị (njikwa netwọki) anaghị na-ejikọ.
Ndewo Carlos, ị nwere ike ịnwale ịwụnye nchịkọta ndị a:
zypper na kernel-femụwe
Ọ bụrụ na ọ bụ obere:
zypper na usoro-emegheSUSE-laptop
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe nyere aka wụnye kernel ndabara. Iji hụ ihe kernel ị na-eji na-agba ọsọ uname -a. Ọ bụrụ na ị hụ na ọ na-ekwu na aha «desktọọpụ» wụnye a:
zypper na kernel-ndabere
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe nyere gị aka ị nwere ike ịnwale kernel vanilla (nke sitere na kernel.org na-enweghị mgbanwe site na openSUSE):
zypper na kernel-vanilla
Amaghị m ma ọ bụrụ na nke a bụ nke gị, mana m ga-etinye ma ọ bụrụ na enweghị ACPI ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ na anaghị m etinye ma ozugbo awụnyere m ga-aga Bootloader nhazi na YaST2 wee gbanwee ọkọlọtọ si ACPI = pụọ ka ACPI = Gbanye, ọ bụrụ na ọ bụghị , Anaghị m agbanyụ.
Daalụ petercheco maka isiokwu ahụ, ọ bara ezigbo uru. Aga m ezo aka na ya mgbe m kwalite na OpenSuse 13.2.
SuSe meriri m site na 7.3. Ọ bụ ugbu a OS m kwa ụbọchị, nwere afọ ojuju.
Daalụ nke ukwuu ma enwere m obi ụtọ: D.
Onye ọ bụla maara otú e si wụnye Dropbox na emepeuse 13.2 ma enwere m nsogbu n'ihi na m wụnye virtualbox ma mgbe m na-agba ọsọ ọ naghị eme ihe ọ bụla
zypper na Dropbox nautilus-Dropbox
Ọ na-abịa na repos :).
Ma VirtualBox ị ga-etinyere ngwungwu a:
zypper na virtualbox-qt
Mgbe ahụ ị mepee Yast ma ị gaa na njikwa ọrụ -> dezie -> nkọwapụta na n'aka nri ị hụrụ otu. N'ime ha ka a ga-akpọ onye a na-akpọ vboxusers. A gharịrị ịrụ ọrụ ya. Reboot na-aga.
Edemede dị ezigbo mma, enwere m mmasị na OpenSuse mana enweghị m ike ikewapụ onwe m na cinnamon ọzọ, mmadụ nwere ike ịgwa m otu m ga-esi wụnye desktọọpụ a na oSUSE 13.2? Daalụ nke ukwuu.
Nke a bụ ihe m chọtaworo:
Daalụ, m na-enyocha ntuziaka. 😉
Mee obere ntinye na X wee jiri ntuziaka a:
zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/X11:/Cinnamon:/Factory/openSUSE_13.2 pawuda
zypper na -t ụkpụrụ pawuda
zypper wụnye-ọhụrụ-na-atụ aro
Daalụ maka ozi ahụ, m ga-eche ụbọchị ole na ole wee gbalịa ime ya. 😉
ebe m tinyere nvidia 750ti m enweghi ike igba distro.
ọ dịghị onye na-agwụcha.
Ndewo, na OpenSUSE 13.2, etinyekwara "mgbakwunye ndị agbakwunye" dị ka Ubuntu?
Zaghachi Avelino De Sousa
Enweghị "wụnye ubuntu-ejiri-agbakwunye-mgbakwunye" dị ka ndị dị otú a, ma ọ bụrụ na ị meghị ka nchekwa Packman na libdvdcss wee wụnye nchịkọta kwekọrọ, n'onwe gị na 13.1 agbasoro ntuziaka a:
N'okpuru ebe a bụ ngalaba na-akọwa otu esi eme ya.
Ka anyị hụ ma pacman agbakwunyere ya ebe a na post m :). Ga-agụ ...
Ndo, achọtara m nke 13.2:
Ezigbo distro !!! Naanị m wụnye ya na PC m maka oge mbụ !!! Ọ dị ezigbo ọsọ ma kwụsie ike. M ga-efu efu ịhụ ka m siri wụnye isiokwu GTK na akara ngosi akara ka ọ dị mma. Daalụ si Argentina! Mario.
Wụnye ngwugwu a:
zypper na gnome-tweak-ngwa ọrụ
Ndewo PeterCheco, enwere m ajụjụ. Nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja a nke ị jiri ezigbo mma? Ọ na-amasị m nke ukwuu (maka ugbu a anaghị m eji OpenSUSE ma LMDE). Daalụ ma ana m ekele gị site na Košice. 😉
I meela enyi… nnem, gini ka imere na Slovakia?
Ndewo, ekele maka akwụkwọ ahụaja! 🙂
Ana m eme ihe niile m nwere ike ime ebe a. Ana m ebi, na-amụ ma na-arụ ọrụ. 😀
Madreeee… :). Ma ị bụ onye Hispanic ma ọ bụ onye Slovak onye mụtara asụsụ Spanish site na iberibe nne? Ọ bụrụ na ndị Czech na ndị Slovak bụ otu na-agbaze: D. Na C si kwa ...
Esi m Venezuela. Ale viem aj slovenský psať, hovoriť. 😛
Biko! ị nwere ike ịgwa m otu esi eme USB bootable na opensuse 13.2 si Ubuntu? Agbalịrị m multisystem ma ọ naghị anabata ya… M nwara na Unetbootin na ………. kedu ka m ga-esi mee?
ps: Enyochare m oghere nke otu esi mepụta eriri bootable ọ naghị arụ ọrụ maka m ...
Lee anya, nwalee iwu "dd" ...
Hichapụ ihe niile partitions gị USB nwere na GParted ma ọ bụ na software na ị chọrọ ... (ndabere data tupu, n'ezie)
# dd ma ọ bụrụ = »ụzọ / ka / emepeuse.iso» nke = / dev / sdX
Dị ka ị ga-achọpụta, ọ ga-agba ọsọ dị ka mgbọrọgwụ, yana ụzọ nke iso gị ga-aga n'enweghị nne na nna ọ gwụla ma ọ gụnyere oghere (ị nwere ike iji azụ azụ na oghere ndị ahụ), yana n'okporo ụzọ gị, gbanwee X maka n'ụzọ nkịtị na usoro ahụ E kenyere m gị na eriri gị (ị nwere ike ịlele ya na sudo fdisk -l), kpachara anya, ịkwesighi ịkọwapụta nkebi ọ bụla, ya bụ, ị ga-ahapụ naanị sdX, ọ bụghị sdX1 ma ọ bụ sdX2 ... wdg.
Na-echere ka ọ gwụ (oge igbu oge ga-adaba na nha nke ISO na ọsọ ọsọ nke eriri gị ...)
Kwesịrị inwe ike buut si n'ebe ...
Ndewo, wụnye Imagewriter. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji mee USB Bootable. sudo apt-nweta wụnye USB-imagewriter.
dd ma ọ bụrụ = la_iso_opensuse.iso nke = / dev / sdb (ma ọ bụ leta ọzọ kwekọrọ na eriri gị).
Amaghị m ihe kpatara na enweghị m ike ị nweta Epson Stylus Photo R265 onye nbipute m na-arụ ọrụ na distro a, ọbụnadị ibudata ndị ọkwọ ụgbọala site na peeji nke Epson wee budata ya ma jikọta ya n'oge echichi. N'uche m, ụdị ngwa nbipute a anaghị arụ ọrụ na sistemụ nrụọrụ a.
N'ehihie, mgbe m na-agụ akwụkwọ a, ahụrụ m na ị na-eji oghere guse ma ọ ga-amasị m ịma etu o si aga na nkwado nke ọtụtụ mgbasa ozi ebe ọ bụ ezie na ọ wụnye nkwakọ ngwaahịa na ọtụtụ kodeks, totem na rhythmbox na-enye m nsogbu. na-egwu ụfọdụ multimedia faịlụ na m na-ahọrọ iji ndị a na nhọrọ ndị ọzọ dị ka gnome-mplayer ihe atụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-enweghị ike, gịnị ka anyị ga-eme?
tinye iwu a ma wụnye codec:
zypper wụnye libxine2-codecs k3b-codecs ffmpeg ngwụrọ gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-jọrọ njọ gstreamer-plugins-mumm-orig-addon gstreamer-plugins-libav libdvdcss2
Kedu ihe m ga-atụfu ma ọ bụrụ na etinyeghị m nchekwa Packman?
Ka emechara nke a, ihe mbu 200 akwadoro, mgbe ahụ nchịkọta 300 ka ịtinye ọzọ na ngwụcha ọ bịara na totem enweghị ike igwu egwu .mkv .mp4 .wmv .3gp etc wdg ma wụnye vlc! Mba!
Azịza m gara aga na-eme ka obi sie gị ike.
Ndi otu OpenSuse ga-edozi Firefox na Thunderbird 25 oge mmeghe nke abuo?
Chọọ google maka faịlụ LibreOfficeTurno.sh ma megharịa ya, ọ ga-ewepụ nsogbu oge a, libreoffice, firefox, thunderbird, wdg.
Zaghachi Geraldo Rivera
Echere m na ị pụtara nke a:
Ọ naghị arụrụ m ọrụ na OpenSuse, na nkesa ndị ọzọ ọ na-arụ. Ọ bụ nsogbu na achọtabeghị m azịza maka ọtụtụ nsụgharị nke OpenSuse na ọ na-ewute m n'ihi na ọ bụ naanị na ngwa atọ ka m na-eji ọtụtụ (firefox, thunderbird and libreoffice).
Agbanyeghị, ekele maka enyemaka.
Nke a na - edozi nsogbu gị:
Mepee Yast ma gaa na njikọ netwọk. N'ime ị na-agagharị na taabụ na DNS na aha usoro. N'ebe ahụ ka ịchọta ngalaba aha PC ma ị ga-pịa n'okpuru aha nnabata a na-akpọ Set hostname to ip (loopback).
Zọpụta ma gaa :).
Anọ m na-agbalị ịkwụsị IPV6 na ma Firefox na Yast mgbe m hụrụ ozi gị wee hụ ìhè 🙂
Nnukwu ndu, ị dị ka onyinye mgbe niile maka nkesa a magburu onwe ya. Onwe m, ọ masịrị m iwepu (ma tinye ya na TABU) ngwugwu "PackageKit" site na oge echichi, n'ihi na ọ na-akpasu m iwe mgbe niile.
N'uche nke onwe, ịwụnye ihe, zypper ezuola ma enwere ọtụtụ ya (yana Yast2 ọ bụrụ na ịchọrọ iji eserese eserese) m aghọtabeghị ihe kpatara "apper". Ihe dị mma gbasara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ na enwere ike ịhọrọ ya, yabụ onye ọ bụla na - ahọrọ ihe masịrị ya. ^ _ ^
Daalụ nke ukwuu enyi… :). Ọ bụ eziokwu na ihe ị na-ekwu. Achịcha nwere ike ịpụ. Ana m eji zypper na yast dị ka gị.
Petercheco, ị maara ma ọ bụrụ na 13.2 bụkwa LTS? ma ọ bụ naanị 13.1 nke m na-eji ugbu a na desktọọpụ .. !!!
Agbanyeghi na m nwere Mint kde na laptọọpụ, a na m eji desktọọpụ karịa na emepeuse 13.1 ma agụọla ụfọdụ ihe ịtụnanya nke 13.2 mana enweghị m obi ike ibudata ya. !! Ka m chọrọ ịgbanwe Mint nke laptọọpụ maka ụfọdụ ndị ọzọ
Naanị 13.1 :). N'ezie .. opendị OpenSUSE niile nwere nkwado nke nsụgharị abụọ na-esote yana ọnwa abụọ ị ga-esi nweta ọnwa 20.
Chei, ihe di egwu mere m. M arụnyere niile multimedia codecs, M nwere ike na-ele niile di iche iche nke vidiyo site na vlc. Site na mp4, ka Vob. Otú ọ dị, ụnyaahụ, November 18, Tuesday, ejiri m iwu ahụ, dị ka mgbọrọgwụ: "Zypper dup" na ya niile gbagoro. …. Ọ na-eje ozi ihe niile site na mp3, clementine, magburu onwe ya. Agbanyeghị, ma vidiyo vidiyo OpenSUSE nke ndabara, dị ka VLC. Enwetara m njehie na-esonụ:
«Na-enweghị adabara decoder modul:
VLC anaghị akwado vidiyo "h264" ma ọ bụ usoro ọdịyo. O di nwute na odighi uzo isi dozie ya.
-Enweghị kwesịrị ekwesị decoder modul:
VLC anaghị akwado usoro ọdịyo ma ọ bụ vidiyo "mp4a". O di nwute na odighi uzo isi edozi ya. "
Adịla mma na gburugburu, n'ezie…. uu
jojojo, Emere m ihe niile ọzọ, ihe m na-ekwu bụ, m laghachiri ime ihe m mere na mbụ, tupu m lelee blog a na m mere ihe ị tinyere na ọ rụpụtara m, m mere ya ọzọ na ọ bụ ya. ; -; : 'v kedu ihe anyị na-atụ ụjọ.
Ndo maka ndu m nile na m gbalịrị ịmalite mmaliteuseuse bootable si usb enweghị ike, linuxlive usb kee windo na unetbootin maka Linux anaghị efe m ka o doro anya naanị na oghere windo, nkọwa ọ bụla ma ọ bụ enyemaka biko? Daalụ n'ọdịnihu..
Ndewo, jiri rufus, o kweghi m ma ya na na ihe nile na aru oru.
amaghi aha dijo
Rufus na-arụ ọrụ, mana ya na usb ee na nke dị iche, ọ kwadoghị kernel ahụ tupu etinye ya. Mgbe ụfọdụ ọ na-adaberekwa na pendrive.
Zaghachi ka anonimaclese
Wunye Opensuse13.2 Enwere m nsogbu na ịnwa imepe pdf ya na okular na okular na-emechi igwa m ihe kpatara ya?
OpenSUSE 13.2 emelitere
Emechara m imelite OS. Na mbu echere m na odi nma, dika odi na mbu. Buut dị nwayọ nwayọ karịa OpenSUSE 13.1.
Daalụ maka ntuziaka. Ọ bụ ezigbo ntụnye.
Mgbe ị wụnye emepeuseuse 13.2 ọ na-ajụkarị m maka eriri echichi iji wụnye mmemme ọ bụla ma ọ bụ mee mgbanwe ọ bụla site na yast ọ na-agwa m na ịnweghị ike ịnweta usoro ntinye na ụzọ nke eriri USB, m tinye ya wee mee mgbanwe ahụ, kedu ka m ga - esi dozie nke a Ana m arịọ mgbe niile maka eriri USB
Nnọọ! Lee na ndepụta nke nchekwa ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ nke na-ezo aka na ntinye nrụnye, n'ọnọdụ gị USB, ma gbanyụọ ya. Ọ na-abụkarị nke mbụ.
N'ezie. Na Yast ị na-aga ebe nchekwa na ebe ị kwụsịrị ọrụ repo na-ezo aka na USB ma ọ bụ DVD gị :).
Kedu aha aha nchekwa ahụ ??? gbanyụọ ụfọdụ na otu ihe na-eme.
A na-akpọ ebe nchekwa DVD openSUSE-13.2-0
Ndewo, naanị m wụnye suse 13.2, ihe niile dị mma, ọ naghị amata ọdụ ụgbọ mmiri m ma enweghị m ike ịpị mkpanaka maka njikọ wifi, ị nwere ike inyere m aka?
Zaghachi Pablo Pérez
Wụnye Desktọpụ Kernel ma ọ bụrụ na ị nwere 64 bit ma ọ bụ 32 bit processor na PAE:
Iji chọpụta ma onye nhazi gị na-akwado PAE ọsọ:
pusi / proc / cpuinfo
Ọzọ ọzọ bụ dezie yast2-> System -> / etc / sysconfig ma tinye xhci_hcd na INITRD_MODULES na MODULES_ownloadED_ON_BOOT
Ndewo Peter, etinyego m Kernel Desktop, amalitegharịrị m kọmputa na ihe ọ bụla, amaghị m ma m ga-eme ihe ọ bụla ọzọ. N'aka nke ọzọ, achọrọ m iji nke ọzọ na amaghị m etu esi eme ya.
Ọfọn, nke a dị egwu ... Nke a emeghị m. Nyochaa na BIOS ma ọ bụ UEFI na ị nwere USB ọdụ ụgbọ mmiri nyeere ọ bụrụ na ọ bụrụ na ha arụ ọrụ n'enweghị nsogbu.
Ihe ọzọ m nyere gị bụ iji ngwa Yast ma ị gaa na ngalaba sistemụ na / wdg / sysconfig. All graphically, ma ọ bụrụ na ị wụnye kernel na Desktọpụ a adịghị mkpa n'ihi na ị.
Hi Peter, nsogbu edozila. Site na ndụmọdụ gị, abatara m BIOS ma enweghị m ọdụ ụgbọ USB arụ ọrụ, enyere m ha aka ma na-akpaghị aka ihe niile m matara ghọtara ya ma rụọ ọrụ zuru oke.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ntinye na ntinye aka gị.
Mkpokọta sitere na Canary Islands. (Spain)
Anyi nabata enyi, nke ahu bu ihe anyi biara :).
Ekele taa site na Prague mana echi site na Madrid (Spain).
Ekele m na-anwale 13.2 na intel dual core, 4gb ram, rtl8187 na n'oge m masịrị ya, anwalela m Ubuntu, Fedora, Mint ... ọ bụkwa oge mbụ m wụnye Open Suse n'oge ihe niile dị mma, ọ bụ naanị obere nsogbu Netwọk njikwa ahụ wụnye iw, ebe ọ bụ na enweghị m njikọ internetntanetị n'ihi na enweghị m ike ijikọ na Wi-Fi, m wụnyere ya na ntinye ahụ site na Yast ma dozie nsogbu ahụ, ekele maka onyinye ahụ.
Enwere m olileanya na ndị a bụ koodu dị mkpa maka desktọọpụ KDE.
Zaghachi Jose A. Lopez
Ọ bụ maka gburugburu ...
Ndewo, na nke ahụ dị mkpa iji koodu mee ya? M nnọọ arụnyere OpenSuse 13.2 na ọ na-egosi na graphic mode iji wụnye mmelite, adịghị m pịa Wụnye na-eche azịza gị, ma ọ bụrụ na m na-eme ya na graphic mode ma ọ bụ njikwa, m na-ege ntị.
Zaghachi Cristian Rengifo
Nwere ike ime ya ma site na njikwa na Yast, mana njikwa na-ewe obere oge: D.
Ezigbo onye nduzi !! Daalụ nke ukwuu na ọ bụ ezigbo aka !!
Ana m asị gị nnọọ :). Obi dị m ụtọ.
Ọmarịcha, ekele maka ntuziaka. Cheers
Zaghachi gonzalezmd (# Bik'it Bolom #)
I meela .. obi dị m 🙂
Nchịkọta 810 iji kwalite na ntinye ọhụụ !!!!
Ebee ka a hụrụ….!
n'ehihie, enwere ike itinye ụdị a n'ịntanetị, dị ka mbipute 11.0
32 dị: http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-i586.iso
64 dị: http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-x86_64.iso
Ndewo, enwere m ajụjụ, ọ na-egosi na m nwere openuse 13.2 arụnyere na kọmputa m mana achọrọ m ịtọọ ọrụ na crontab, nke mere na ọ na-agbanyụ na-akpaghị aka, emeela m ya na ubuntu na nsụgharị ndị ọzọ nkeuseuse mana na ụdị a, ọ chọghị ịgba m ọsọ. usoro ndị a:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ahọpụtara m ya ka ọ gbanyụọ ya kwa ụbọchị ma elekere asatọ nke ụtụtụ wee gafee elekere asatọ nke ụtụtụ.
Zaghachi JUAN CARLOS FERRER
20 20 * * * mmechi -h ugbu a
20 20 * * * ntụ ntụ
Onye njem uka dijo
Achọrọ m ịwụnye oghere na Windows 8 ... mana m na-anwa ịwụnye ya na eriri USB ma, n'eziokwu, amaghị m ihe m kwesịrị ime. E nwere otu ebe ọ na-ajụ m ka m họrọ diski na, ka m na-agụ, kwesịrị ịbụ onye nwere oyiyi iso nke usoro iji wụnye, mana m na-ahọrọ eriri "bootable", ọ ka na-ajụ m maka otu ọnọdụ, dịka ụzọ, Amaghị m ihe m ga-etinye: S
Zaghachi onye njem ala
Ejiri m programmụ "rufus" wunye USB na uefi. Naanị ma ọ bụrụ na ịhapụ disk ebe ị ga-etinye njikọ. Enweghị m nsogbu. Agbalịrị m tupu oge mmemme ndị ọzọ ma ọ nweghị onye rụụrụ m ọrụ.
Kwadebe eriri USB:
Ntuziaka ntinye (13.2 ma ọ bụ Tumbleweed na-etinye otu ihe ahụ):
Ndewo onye ọ bụla!!! Enwere m obere ihe ọ bụla na Linux ma enwere m nsogbu na ụda ahụ. Enwerem kaadi ụda USB ebe ọ bụ na ụda kaadị m nwere na kọmputa m gbara !!! Nsogbu a dị na PULSE ebe ọ bụ na site na ALSA ụda ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ha abụọ njikọ microphone na-arụ ọrụ na alsa na pulse ọ naghị arụ ọrụ !!! Anọ m na-eji WIFISLAX na ụda na igwe okwu na-arụ ọrụ zuru oke maka m na ọ na-eweta Alsa dịka onye ọkwọ ụgbọ ala, mana yana nkesa ndị ọzọ nwere Pulse, igwe okwu anaghị arụ ọrụ m !!! Ọ BR SOM na mmadụ nwere ike m ka m gbanwee site na pullu na ALSA M ga-ekele gị. MA Ọ B IF Ọ B IFR YOU NA YOU MARA NZỌ ỌZỌ, M nwere olile anya na ị nwere ike inyere m aka, ekele m niile !!!